Toeram-pisakafoanana an-tserasera Zeorziana - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(946 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ...Georgia dia iray amin'ireo firenena vitsivitsy ao Caucasus atsimo, izay misy ara-dalàna tanteraka ny filokana. Ny indostrian'ny filokana ao amin'ny firenena dia nanomboka tamin'ny andron'ny NEP, rehefa nisokatra ny trano filokana voalohany tao Tbilisi. Na izany aza, nisy izy ireo (telo taona) ary niova tsikelikely ny asany tamin'ny Mey 1928, rehefa voarara ny filokana rehetra any amin'ny faritry ny Firaisana Sovietika.
Amin'izany fotoana izany, na any Torkia mpifanolo-bodirindrina aminy, i Russia ary i Azerbaijan, ny orinasa filokana dia ao anatin'ny toe-javatra tena sarotra, ny trano filokana ao Georgia dia misokatra amin'ny mpitsidika rehetra. Na eo aza izany, ny olan'ny filokana ary indrindra ny olana mifandraika amin'ny filokana dia tsy mitsaha-mitombo. Ny firenena dia niresaka matetika tamin'ny mpanao lalàna sy ny olom-pirenena tsotra momba ny lafiny ratsy amin'ny filokana.
Lisitry ny Top Sites amin'ny Casino ao amin'ny 10 Georgian Online
Ny hevitry ny besinimaro momba ny filokana dia tsara, maro ny olona misafidy ny filokana ho iray amin'ireo hetsika tiany. Ny fanadihadiana natao tato ho ato dia manamafy fa ny mponina Zeorziana dia misy ifandraisany amin'ny filokana. Fantatry ny Zeorziana fa manintona renivohitra vahiny tena ilaina ny trano filokana, ary miaraka amin'izany ny mpizahatany mpizahatany.
Ny Parlemanta Zeorziana dia mandinika volavolan-dalàna iray natao hampihena ny voka-dratsy ateraky ny filokana. Ny tolo-kevitra dia mifandraika indrindra amin'ny fameperana ny fahazoana miditra amin'ny casino sy andrim-pitandremana hafa filokana amin'ny mponina eo an-toerana, mandray ny karama. Tolo-kevitra ny hamela ny filokana fotsiny ho an'ireo olom-pirenena izay mahatratra 500 GEL farafaharatsiny, ary izay manana GEL tsy latsaky ny 5000 amin'ny kaontiny any amin'ny banky. Mbola dinihina ny sosokevitra.
Lalao an-tserasera any Géorgie
Ara-dalàna tanteraka ny filokana amin'ny Internet any Georgia. Mampiavaka ity sehatra ity ao amin'ny firenena ny zava-misy fa saika ny trano filokana an-tanety rehetra dia manana tranokalan'ny Internet. Ny indostrian'ny filokana an-tserasera any Georgia dia miasa mpandraharaha eo an-toerana sy any ivelany, satria ny fepetra hahazoana fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny lalànan'ny filokana amin'ny Internet any Georgia dia tsotra. Ny filalaovana filokana amin'ny Internet any Georgia dia mety ho klioba mifanerasera manokana misolo tena ny efitrano misy solosaina mifandray amin'ny Internet ary napetraka stvu ao amin'ny tranokalan'ny casino ao an-toerana sy vahiny.
Tian'ireo Zeorziana ny milalao amin'ny filokana an-tserasera amin'ny klioba toy izany, saingy ankehitriny dia mihamaro ny olona mampiasa izany fitaovana izany ao an-tranony - solosaina, telefaona finday sns.
Vao haingana, ny Parlemanteran'i Georgia dia nihevitra ny hetsika mba handrarana ny dokambarotra momba ny filokana ao amin'ny firenena. Raha toa ka hahazo ny herin'ny lalàna ilay tolo-dalàna, ary misy fiantraikany amin'ny filokana amin'ny Internet ihany koa. Ankoatra izay, ny tolo-kevitry dia manome fifehezana henjana kokoa amin'ny fandraisana anjara amin'ny filokana amin'ny olona ao anatin'ny taona ambany, ary ny sazy ambony kokoa noho ny fitondran-tena tsy mendrika ataon'ny mpandraharaha.
Georgia Online - Miloka any Georgia
Zeorzia - dia firenena manintona manana natiora tsara tarehy sy toe-javatra tsara indrindra ho an'ny fialamboly sy fizahan-tany. Sakafo folklore sy gourmet eo an-toerana, ary koa ny fahaizan'ny olona mandray vahiny amin'ity firenena ity miaraka amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao. Ny fepetra amin'ny filokana amin'ny endrika miorina amin'ny tany, sy ny Internet dia ahafahana mankafy ny lalao. Fa hiresaka momba izany isika avy eo. Ka nalefa tany Tbilisi ireo CasinoToplists!
Casino ao Georgia:
Ny tantaran'ny filokana;
Ireo lalao casinos hita ao Georgia dia manana fisiana ao amin'ny aterineto;
Misy ihany koa ireo mpikarakara Georgiana sy iraisam-pirenena;
Mihevitra ny volavolan-dalàna iray mba hanamafisana ny fidirana amin'ny loharanom-pifandraisana iraisam-pirenena amin'ny aterineto;
Ahoana ny filalaovana ny casino an-tserasera? Torolàlana tsikelikely;
Toerana an'i Georgia ary tantara fohy ara-tantara;
Zavatra mahaliana momba an'i Zeorzia sy Zeorziana;
Filokana an-tserasera any Georgia - tantara ara-tantara
Alohan'ny hamaritanay ny toetry ny filokana an-tserasera eto amin'ny firenena, dia manolotra fohifohy ny tantaran'ny filokana ao Georgia.
1801 - 1922 Georgia dia ampahany amin'ny fanjakana rosiana ary manaraka ny fepetra takiny momba ny filokana. Tamin'ny 1918, fotoana fohy nahaleo tena, ary tamin'ny 1922, niaraka tamin'i Armenia sy Azerbaijan dia lasa anisan'ny Repoblika sosialista Sovietika Federaly Transcaucasian. Tamin'ny taona 1920 tany Tiflis dia nanana trano filokana 2 ary nanokatra ny orinasany ho an'ny famokarana karatra filalaovana. Andininy 235 amin'ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava ao amin'ny GSPC manohitra ny fikarakarana hetsika filokana tsy ara-dalàna - fanagadrana hatramin'ny 3 taona, ary mety fanagiazana fananana.
1959 Tbilisi dia manolotra filokana amin'ny hazakazaka. Orinasa filokana tsy ara-dalàna maro.
1990 Mahazo toerana ara-dalàna ny asa filokana. Ny casino «Ori Juja» voalohany ao Tbilisi.
1991 Nahazo fahaleovan-tena i Georgia. Ny fihetsika Sosbstvennoe manoloana ny filokana.
1992 Ny filoha Zviad Gamsakhurdia dia namoaka ny lalàna voalohany “Momba ny fanatsarana ny fitsipiky ny loteria sy filokana hafa ao amin'ny Repoblikan'i Georgia.” Ny famoahana fahazoan-dàlana amin'ny casino.
1997 Code code.
2000 Ny filoha Eduard Shevardnadze dia nanolotra volavolan-dalàna mandrara ny filokana. Nolavina ilay tetikasa. Amin'izao fotoana izao dia miasa mihoatra ny 20 ny trano filokana any Georgia, ny 18 amin'izy ireo dia ao Tbilisi.
2002 Lalàna 1426-Masoandro "Miorina amin'ny famoahana fahazoan-dàlana sy fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa." Fepetra vaovao amin'ny famoahana fahazoan-dàlana sy fahazoan-dàlana.
2003 Eduard Shevardnadze, indray dia manandrana mandrara ny fandraharahana filokana, saingy nandimby ny filoha Mikheil Saakashvili tamin'ny 2004. Ny ampihim-panjakana amin'ny loteria.
2005 Lalàna № 1180 “Amin'ny fandaminana loteria, filokana ary lalao hafa ahazoana tombony.” Miasa mandraka androany izy io, miaraka amina fanitsiana marobe.
2014 Manana orinasa filokana 94 ny firenena. Ny ankamaroan'ny trano filokana misokatra sy fivarotana filokana ao Tbilisi, Batumi ary Kutaisi dia manaraka azy. Ankoatry ny olom-pirenena Zeorziana anisan'ny mpitantana dia teratany Russia, Turkey, Armenia ary United Kingdom.
2000 - 2017 Miloka amin'ny Internet. Saika ny trano filokana an-tany rehetra, izay manana fahazoan-dàlana ofisialy, manokatra ny tranonkalany amin'ny lalao an-tserasera. Maimaimpoana ny lalao mpandraharaha iraisam-pirenena.
(Vaovao nalaina tao amin'ny boky Eugene Kovtun "Ny fientanam-po ao amin'ny firenena Sovietika")
Amin'ny firim-pitondrany inona moa ny orkide ara-bola an-tserasera?
Azo inoana, amin'ny fotoana maharitra any Georgia dia hivelatra ny volavolan-dalàna mifehy ny filokana amin'ny Internet amin'ireo mpandraharaha vahiny. Izy ireo no rohy malemy indrindra amin'ny resaka fanaraha-maso ny filokana ataon'ny fanjakana. Ny trano filokana an-tany sy an-tserasera dia voatery hanamarina tsara kokoa ny mpilalao azy ireo amin'ny taonan'ny maro an'isa, ary koa ny famolavolana rafitra iray hiadiana amin'ny lalao zavisimostyu- Gamblers.
Misy trano filokana miorina amin'ny tany Zeorziana? Mitadiava izany amin'ny endrika an-tserasera ihany koa. Voarara ny fandaminana ny filokana an-tserasera tsy misy analogue terrestrial ampy tsara miaraka amin'ny fahazoan-dàlana manan-kery ao amin'ny faritanin'i Georgia. Izany hoe, raha milalao ao amin'ny mpandraharaha Zeorziana ao Georgia ianao dia tsy manana casino mitovy anarana aminy - tsy ara-dalàna izany;
Azonao atao ny milalao amin'ny filokana an-tserasera iraisam-pirenena, izay manana fahazoan-dàlana manokana. Tsy mifanohitra amin'ny lalàna izany. Tsy voasakana ireo mpandraharaha iraisam-pirenena, araka ny mitranga, ohatra, ao amin'ny Federasiona Rosiana.
Raha ny marina dia afaka milalao ao amin'ny casino tsy misy fahazoan-dàlana ianao, fa noho izany dia manao izany ianao amin'ny risika manokana.
Famaranana: Ilay mpilalao an-tserasera dia afaka misafidy eo amin'ny karajia any Georgia mifandray amin'ny endrika anaty aterineto sy iraisam-pirenena.
Ahoana no hanombohana milalao an-tserasera ao Georgia?
Mifidiana katy amin'ny Internet . Ahoana ny fomba hiarovanao tena rehefa misafidy mpandraharaha iraisam-pirenena ianao? Araraoty ny lisitry ny casino azo itokisana. Ao amin'ny tsanganana ankavanana no misy azy.
Fianarana fianarana . Diniho ny fampahalalana rehetra ao amin'ny tranokalan'ny casino an-tserasera (fepetra momba ny fahazoan-dàlana amin'ny fametrahana sy ny fisintomana, ny bonus ary ny filokana raha misy ny tamberina avy amin'ny casino (chat an-tserasera, adiresy, nomeraon-telefaona)
Vakio ny mpitsidika momba an'io loharano an-tserasera amin'ny tambajotra io. Aza adino fa tsy ny hevitra rehetra dia tena izy ary azo amboarina.
Money Talks . Inona avy ireo safidy atolotry ny casino amin'ny fanampiana na fisintomana vola? (Avy amin'i WebMoney, carte de crédit ary carte debit amin'ny alàlan'ny Visa, Yandex, sns. Inona avy ireo fepetra amin'ny famoahana vola? Inona no mety aminao?
Ny karazana lalao . Lalao isan-karazany inona no atolotra, ity casino ity? Misy zavatra mifanaraka aminao sy tianao ve?
Lalao malalaka . Rehefa ny fotoana hilalaovana amin'ny maody fitsapana voalohany dia andramo atao. Eo amin'ireo "fonosana" fotsiny. Ka ho hazava kokoa raha milalao ianao na mifanaraka toa azy. Ankoatr'izay, amin'ny lalao sasany, toy ny baccarat na keno dia tsy zava-dehibe ny famakiana mialoha ny lalàna. Manasa anao izahay hianatra momba ny lalao diffe sy paikady mety hanampy anao hifehy tsara kokoa sy handany ny volanao.
Toerana iray any Zeorzia ary fohy ara-tantara fohy
Any atsinanana Atsinanana no misy an'i Georgia, izy io dia mivoaka mankany amin'ny Ranomasina Mainty. Ny fanjakana akaiky indrindra dia i Russia, Armenia, Turkey, Azerbaijan.
Ny faritany misy azy dia be mponina na dia eto aza ny taona arivo II BC Ny vanim-potoana volamena an'i Georgia dia nitranga tamin'ny fotoana nanjakan'ny Mpanjakavavy Tamara tamin'ny taonjato faha-XII-XIII. Mandra-pialan'ny governemanta imbetsaka ny fotoana ankehitriny, miditra amin'ny ady izy, ny tafika ary ny firaisana ara-politika. Ny drafitra napetrak'izy ireo ankehitriny dia azo tamin'ny 1918. Taona maro taty aoriana tao amin'ny USSR.
Tamin'ny 1991, taorian'ny fianjeran'ny Firaisana Sovietika dia lasa mahaleo tena indray i Georgia ary tamin'ny 1992 dia niditra tao amin'ny Firenena Mikambana. Androany, misy firenena manodidina ny 4.5 tapitrisa ny firenena. Izy no filoha Giorgi Margvelashvili ary ny praiminisitra - Irakli Garibashvili.
Zeorzia amin'ny sarintany Azia
Trinité Masina Trinite Masina ao Tbilisi . Io no anaran'ny Katedraly Trinite Masina ao Tbilisi. Toerana: Georgia, Tbilisi, Elia Hill. Fiangonana Young Orthodox, noforonin'i Archil Mindiashvili - iray amin'ireo tranobe tsara tarehy indrindra ao Tbilisi.
Nerikala . Adiresy: Mount Mtatsminda any Tbilisi. Ny sombin-tany tranainy indrindra amin'ny tanàna mimanda dia an'ny taonjato IV.
Turtle Lake . Toerana: ny havoana avaratry ny Mount Mtatsminda, 3 km miala an'i Tbilisi. Toerana fialantsasatra malaza, dia ny fiara tariby.
Anchiskhati . Adiresy: st. Shavteli, 9, Tbilisi. Ny fiangonana ortodoksa Zeorzika tranainy indrindra ao amin'ny firenena, nanomboka tamin'ny taonjato faha-VI. Araka ny angano dia naorina niaraka tamin'ny mpanjakan'i Iberia Villas Udzharmeli aza izy io.
Keshvati . Adress: Shota Rustaveli, Tbilisi .. The Orthodox Church of St. George tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-XNUMX.
Zavatra mahaliana momba an'i Zeorzia sy Zeorziana
Georgia - anaran'ny firenena, izay avy amin'ny teny arabo. Fanondroana tena dia Sakartvelo.
Iberia - io no anaran'ny faritanin'i Georgia tamin'ny taonjato III talohan'i JK. f. Androany no anaran'ny Espaniola, ary tsy kisendrasendra izany. Ny razamben'ny Espaniola dia tonga avy tany Georgia. Tsy manam-paharoa amin'i Eropa, ny fiteny Basque dia mitovy amin'ny Zeorziana.
Ny fiteny rosiana dia tsy dia be mpitia eto amin'ny firenena, ny ankamaroan'ny olona no takatra. Ho an'ny tanora tsy Rosiana tantanana tsara kokoa ny anglisy.
Ao amin'ny sisa tavela amin'ny olona amn'ny 1 tapitrisa. Taonjato 770, nahita an'i Georgia, ary koa ny kofehy fahiny, izay 34 arivo. Taona.
Ny fanaraha-maso ny filokana any Georgia dia tafiditra amin'ny fidiram-bolan'ny serivisy - sampana manokana eo ambanin'ny ministeran'ny vola. Ny tanjony dia ny hamorona tontolo iainana mahomby amin'ny orinasa, ary koa ny fananganana hetra tsotra sy mazava amin'ny filokana.
Fanompoam-pivoaran'ny sampan'i Georgia
Ny lalàna momba ny filokana ao Georgia dia mifototra amin'ny fototra roa fototra:
ny fiantohana ny rariny sy ny fisokafan'ny orinasa;
Fiarovana ny ankizy sy ny olona mora voadona, izay mety hitarika filokana.
Mikarakara filokana any Georgia, ny mpandraharaha dia afaka misafidy sehatr'asa iray na maromaro misy casino, machine slot, kilalao latabatra, filokana ara-panatanjahantena, bingo, lotto ary loteria. Fahazoan-dàlana mamoaka, ary koa ny fitsipika sy fifehezana ny mpikarakara ny filokana dia mitondra ny Revenue Service (United Tax and Customs Administration).
Raha ny lalàna, ny fahazoan-dàlana hanokatra filokana rehetra any Georgia dia azo alaina amin'ny endrika elektronika, tsy ilaina ny manatrika ny fitantanan-ketra. Ny antontan-taratasy dia manan-kery mandritra ny dimy taona ho an'ny trano filokana slot casino, birao filokana na orinasa misy bingo na bingo, ary herintaona raha amin'ny loteria. Ireo orinasa nahazo alalana hanana trano filokana na slot dia afaka mangataka misaraka amin'ilay antontan-taratasy amin'ny filalaovana birao. Hanan-kery izany mandra-pahatongan'ny vanim-potoana nahatongavan'ilay vahaolana lehibe.
Casino ao Georgia: hetra
Manome fiampangana isan-taona sy isan-telovolana ny lalàna amin'ny karazana filokana isan-karazany. Ny sarany isan-taona ho an'ny fahazoan-dàlana - dia vola raikitra izay aloa amin'ny fizarana mitovy amin'ny mahazatra. Ny isam-bolana dia nampandoavina inefatra isan-taona isaky ny zavatra ampiasaina amin'ny filokana. Ny habetsany dia miova arakaraka ny sehatry ny filokana sy ny faritra misy ilay andrim-panjakana.
Ny varotra dia miovaova be. Ny ankamaroan'ireo dia voakasiky ny toerana misy ny andrim-panjakana, ohatra, ny hetra any Tbilisi, betsaka lavitra noho ny any amin'ny toerana hafa, fa ny fahalianana amin'ny filokana no ambony. Raha mahazo alàlana hanokatra trano filokana eto Georgia dia tsy maintsy mandoa GEL 5 tapitrisa isan-taona amin'ny slots -. GEL 1 tapitrisa Ny tompon'ny casino eo an-toerana hanokatra lalao telo amin'ny tabilao club tsy misy haba isan-taona ao amin'ny faritra, toy ny milina slot - club mitovy.
Ny trano filokana sasany any Georgia dia afaka amin'ny fandoavana isan-taona. Any Batumi, Kobuletti, Khelvachauri, Anaklia ary Ganmukhuri dia tsy afaka mandoa haba, manangana efitrano fandraisam-bahiny 80 ka hatramin'ny 100 eo akaiky eo. Tany amin'ny faritr'i Gudauri, nanafaka tanteraka azy ny trano fandraisam-bahiny Kazbegi, Bakuriani, Tskaltubo ary Sighnaghi. Ao amin'ny sary ny loko manga dia manondro ireo andrim-panjakana izay mahazo tombony ho an'ny efitrano 100+ namboarina, efitrano mena - 80+, maitso - amin'ny lafiny rehetra.
Ny Sampan-draharahan'ny Tale iraisam-pirenena dia hitaky karama fanampiny fanampiny amin'ny filokana:
hetra amin'ny fidiram-bolan'ny tena (karama) - 20%;
hetra fananana - hatramin'ny 1%;
Hetra miditra amin'ny orinasa - 15%;
haba ho an'ny andraikitra, notontosaina nandritra ny fifaninanana - 20%.
Kilalao birao amin'ny birao, efitrano fanaovana milina slot ary boky fanatanjahantena navotsotra tamin'ny adidy hametraka fisoratana anarana ho an'ny taham-bola. Tokony hampiasa azy ireo ihany izy ireo raha manome tolotra fanampiny, toy ny fivarotana zava-pisotro na sakafo.
mamela fotoana ho an'ny orinasa filalaovana lalao any Georgia - 20 andro. Afaka mahazo maimaimpoana ianao. Raha takiana maika ny antontan-taratasy dia azo atao ny mandoa GEL 400 ($ 160) - ho vonona ao anatin'ny 10 andro, GEL 800 (320 $) - 5 andro na GEL 2 arivo ($ 800.) - mandritra ny 1 andro.
Ny fahazoan-dàlana misaraka ho an'ny fandaminana ny filokana an-tserasera dia tsy navoaka, toy izany koa ny tetikasa toy izany dia mety ho tompona andrim-panjakana tena manana fahazoan-dàlana. Zon'izy ireo ny mitantana ilay tranonkala amin'ny alàlan'ny casino, slots, filokana ary ny fanaovana loteria. Ny mpifaninana vahiny tsy atahorany - ny orinasa any ivelany dia voarara ny filokana any Georgia, noho izany ny tsena mampanantena dia maimaimpoana tanteraka ho an'ireo mpandraharaha eo an-toerana.
Araka ny valin'ny fiasan'ny tranonkala toy izany dia mandoa sarany isan-telo volana. Ny halehiben'izy ireo dia mamaritra ny fitondram-panjakana eo an-toerana. Miovaova eo anelanelan'ny 30-60 arivo GEL izy io. ($ 12-24.). Ho fanampin'izany, hetra fanampiny miangona voatanisa etsy ambony.
Tamin'ity fotoana ity tao Tbilisi dia namoaka fahazoan-dàlana 3 Batumi - 11 (andrim-panjakana efatra amin'izy ireo izay nanangana efitrano fandraisam-bahiny) tao Tshaltubo - 5 sy Kazbegi - 1. Noho izany, ny efitrano milina slot 72 dia miasa ara-dalàna amin'ny lalànan'ny lalao Georgia 107 fivarotana fivarotana, orinasa misy klioba filokana bingo 3 na lotto, 41 ary klioba filokana loteria.
Ho an'ny fampahalalana rehetra nomen'ny editorial News of Gambling misaotra an'i Theon Shiukashvili - ny serivisy zokiolona mahazo vola any Georgia. Niasa tao amin'ny Kongresy lalao Georgia tamin'ny naha-mpandahateny azy izy, efa an-taonany niainany tao amin'ny tompon'andraikitra amin'ny hetra nasionaly ary tompon'andraikitra tamin'ny famoahana fahazoan-dàlana ho an'ny fandaminana filokana ao Georgia.
Nahazo fahaleovan-tena, i Georgia dia nanolo-tena hanatsara ny indostrian'ny lalao. Ny toerana ara-jeografika tsara, ny tsy fisian'ny lalàna ny fandrarana ny filokana, ary koa ny tsy fivadihana amin'ny indostrian'ny lalao ataon'ny ankamaroan'ny hery politika, ny fari-kolikoly ambany, ny fahazoana manao raharaham-barotra, ny fepetra ara-dalàna momba ny hetra dia manome filokana Georgia maromaro. tombony.
Ny lalàna Zeorziana amin'izao fotoana izao dia mamela ny karazan-doka filokana rehetra hisy ara-dalàna. Anisan'ireo karazan-java-dehibe - ny trano filokana, ny fandraharahana fanaovana boky (ao anatin'izany ny filokana), ny loteria, ny milina filokana, ny klioban'ny filokana. Ao amin'ny sehatra an-tserasera, ny lalàna dia mamela ny fandaminana trano filokana, filokana ary trano filokana.
Ny endriky ny fikambanan'ny filokana ao Zeorzia dia ny lalao rafitra-elektronika tsy maintsy manana ny fisian'ny filokana (fototra).
Ny orinasa filokana any Géorgie dia fehezin'ny hetsika ara-dalàna:
Lalàna Georgia "Amin'ny fandaminana loteria, filokana ary lalao ahazoana tombony" avy amin'ny 25.03.2005 №1180;
Lalàn'i Georgia momba ny "Fahazoan-dàlana sy fahazoan-dàlana" tamin'ny 24.06.2005 №1775;
Ny lalàna Georgia "Amin'ny sarany fahazoan-dàlana sy fahazoan-dàlana" avy amin'ny 12.08.2003 2937;
Lalàn'i Georgia "Momba ny fanangonana filokana" manomboka amin'ny 29.12.2006 №4250;
Code of Taxes avy ao Georgia avy amin'ny 17.09.2010 №3591;
Didy iraisan'ny minisitry ny fitantanam-bola sy ny minisitry ny atitany any Georgia "Amin'ny fankatoavana ny lalàna ho an'ny tompon'ny andrana fitiliana dia mamela filokana sy lalao hafa ahazoana tombony" avy amin'ny 14.12.2011 №611-1013;
Didin'ny lohan'ny serivisy fanaraha-maso ara-bola an'i Georgia "amin'ny fankatoavana ny lalàna" Momba ny fomba sy ny fepetra ahazoana ny vaovao, ny rafitra, ny fanodinana ary ny fandefasana ny Serivisy fanaraha-maso ara-bola Zeorziana ny mpikarakara loteria, filokana ary lalao hafa ahazoana tombony "Ary" Momba ny lamina sy ny fepetra ahazoana ny fampahalalana, ny rafitra fanatontosana azy, ny Serivisy fanaraha-maso ara-bola ny fanodinana sy fampitana an'i Georgia avy amin'ny casino "avy amin'ny 28.07.2004 94.
Fepetra hahazoana fahazoan-dalana
Any Georgie, fomba fanao mahazatra sy fepetra takiana amin'ny fahazoana fahazoan-dàlana (lisansa) ho an'ny fikambanana sy ny fitondran-tenan'ny filokana.
Azonao atao ny mahazo fahazoan-dàlana afaka orinasa voasoratra ao Georgia, ary ny tompon'ireo orinasa ireo dia mety ho samy mponina any Georgia sy vahiny.
Ny famoahana fahazoan-dàlana amin'ny filokana dia mitondra Revenue Service of Georgia. Ny mpandray vola dia tsy maintsy mandefa ny antontan-taratasy ilaina amin'ny endrika scan miaraka amin'ny fanampian'ny pejy web IRS.
Ny vahaolana amin'ny mpandray dia misafidy ny fandefasana ny antonta-taratasy arakaraka ny lalàna napetraka ho an'ny andro fiasana 1 - GEL 2 arivo / $ 830, 5 andro - GEL 800 / $ 330, 10 andro - GEL 400 / $ 365, mpiasa 20. andro - maimaim-poana.
Ny lisitr'ireo antontan-taratasy takiana mba hahazoana fahazoan-dàlana, lehibe be ary miankina amin'ny endrika filokana.
Ny fahazoan-dàlana handefa hividy peta-drindrina, lotteries, loto fampiroboroboana dia manome ny tolotra ara-bola an'i Georgia:
fitrandrahana avy amin'ny Fanjakana Register;
taratasy manamarina ny fandoavam-bola amin'ny fahazoan-dàlana;
ny fifanarahana eo amin'ny mpiray antoka sy ny olona na ny orinasa izay mamokatra tapakila sarobidy (afa-tsy lalao, voalamina amin'ny endrika elektronika), mampiseho ny isan'ny tapakila vita;
fepetra (fitsipika) an'ny lalao mahasoa ara-bola;
bola an-tsarimihetsika tapakila (afa-tsy lalao, voalamina amin'ny endrika elektronika);
raha ny fandaminana ny filokana - antontan-taratasy izay manamafy ny fanomezana ny loka vola tsy latsaky ny 10 GEL / $ 4, 15.;.
amin'ny raharahan'ny fandaminana totalista amin'ny endrika rafitra elektronika (lalao an-tserasera) - ny filaharan'ny lalao elektronika, izay tokony hofaritana: ny adiresy tena izy izay hitantanana lalao mahasoa sy ny fikambanan'izy ireo, ny lisitra ary ny lisitra ny lalao, ny toerana (s) ary ny fe-potoana farany fandoavana ny vola, ny vaovao momba ny fandrarana ny kilalao amin'ireo olona latsaky ny 18 taona.
Raha hikarakara sy hitarika lalao amin'ny Internet (an-tserasera) lalao ho an'ny mpikarakara ny lalao, dia tsy maintsy mahazo alalana amin'ny "ground" -n'ny lalao (ivelan'ny Internet) ianao. Aorian'ny fahazoana alalana amin'ny lalao ivelan'ny lalao, ny tompona fahazoan-dàlana io dia manan-jo hangataka amin'ny Service Internal Revenue Service any Georgia hahazo alalana hanao lalao an-tserasera miaraka amin'ny fanomezana ny lisitr'ireo antontan-taratasy etsy ambony.
Ny fanomezan-dàlana hiditra amin'ny hetsika ho an'ny fikambanana sy ny fitondran'ny filokana ao Georgia dia manan-kery mandritra ny taona 5.
Ny fandoavana ny fahazoan-dàlana amin'ny fikarakarana filokana any Georgia dia atao isan-taona. Voalohany, ny mpandray vola dia mandoa ny taom-piasana voalohany, ary avy eo manavao ny fahazoan-dàlana isan-taona amin'ny alàlan'ny fandoavana vola hafa.
Ny sandan'ny fahazoan-dàlana dia miankina amin'ny toerana misy ilay asa eo amin'ny sehatry ny filokana.
Ny sandan'ny fanomezan-dàlana handaminana ny filokana any Géorgie
Ny sarany ambany indrindra amin'ny fahazoan-dàlana hitarika hetsika filokana entina mandamina an'ity karazana orinasa ity any amin'ireo faritra fialantsasatra. Ity politika ity dia mikendry ny fampandrosoana ireo fotodrafitrasa fizahan-tany any Georgia.
Noho izany, mahazo tombontsoa lehibe amin'ny fampiroboroboana ny birao ny solontenan'ny casinos sy ny filokana hafa ao amin'ny tanàna ambanivohitra (Borjomi, Batumi, Kobuleti).
Manokana, ny tahan'ny karama isan-taona amin'ny fahazoan-dàlana handamina kasino any Batumi dia 250 GEL / $ 103.6, raha any Tbilisi - .. GEL 5 tapitrisa / $ 2 072 250. Amin'ity tranga ity, raha mahazo alalana ny mpandray handamina ny filokana ao Batumi mametraka ny andrim-panjakana ao amin'ny faritry ny trano fandraisam-bahiny vao namboarina miaraka amin'ny fisian'ny efitrano tsy latsaky ny 100, tsy afa-mivoaka amin'ny fandoavana alàlana hatramin'ny 10 taona. Ho fanampin'izany, omena maimaimpoana ny fikambanana casino faritanin'ny tanàna Kazbegi, Tskhaltubo, Sighnaghi.
Ny toe-javatra dia mitovy amin'ny haben'ny birao fahazoan-dàlana hitarika karazana filokana hafa (loteria, filokana ara-panatanjahantena, klioban'ny filokana). Ohatra, ny vola aloa amin'ny fahazoan-dàlana hikarakara mpanao boky ao Tbilisi dia GEL 200 arivo / US $ 8.3 arivo isan-taona, raha ao amin'ny faritry ny distrika fitantanan'i Batumi, Kutaisi, Rustavi -… Ny vola mitentina GEL / $ 80 arivo . amin'ny taona.
Ankoatra ny saram-pandraharahana isan-taona momba ny fanomezan-dàlana ny filokana, ny loha amin'ny hetsika toy izany dia mandoa saram-pandraharahana, ny isany dia voafetra arakaraka ny andrim-panjakana sy ny isa iray isa:
isaky ny milina slot - GEL 1,5-3.;
isaky ny casino latabatra - GEL 15-30.;
isaky ny klioba filokana latabatra - GEL 3-10 arivo.;
isaky ny lalao amin'ny endrika rafitra elektronika - GEL 30-60 arivo.;
isaky ny vola fisoratana anarana na mahasoa amin'ny lalao kasino amin'ny endrika rafitra elektronika, izay hita ivelan'ny zavatra voalamina, araka ny fanapahan-kevitra, ho an'ny lalao mety na ahazoana tombony - GEL 1-1,5 arivo.;
isaky ny sary fampiroboroboana - 10% amin'ny loka loka.
Ny saram-pandraharahana ao amin'ny fetra voafaritra dia napetraky ny fitantanana eo an-toerana.
Amin'ilay tompon'ny fahazoan-dàlana, izay tsy mahavita araka ny tokony ho izy ny fe-potoan'ny fifanarahana napetraka amin'ny onitra ary takiana voalohany handaminana ny asany arakaraka ny takiana fahazoan-dàlana, ao anatin'ny fetra voafetran'ny vatana namoaka izany. Ny GEL onitra dia tsy mitovy amin'ny arivo. hatramin'ny 10 arivo. / $ 415-4150.
Raha toa ka tsy nahatratra io takiana io ilay tompon'ny fanomezan-dàlana, izay voafetra ny fe-potoana farany ahazoana mitaky ny fepetra takiana, dia nametraka sazy fanindroany tamin'ny habe in-telo izy. Raha aorian'ny faran'ny fe-potoana, miaraka amin'ny fametrahana andro faharoa amin'ny andro tsara, dia tsy nahatanteraka ny fahazoan-dàlana ny fahazoan-dàlana, dia avo telo heny ny sandan'ny onitra. Raha tsy mampihatra ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana ny tompon'ny alalana, ny fanapaha-kevitra amin'ny fanafoanana ny fanomezan-dàlana.
Raha tsy tian'ny tarika filokana ny taona manaraka mba hanohizana ny hetsika izay miandry ny fanapahan-kevitra, dia ampy ho an'ny andro ara-barotra 5 alohan'ny faran'ny fandoavam-bola isan-taona mba hampahafantarana ny Tolotra Internal Revenue, izay manafoana ny fanomezan-dàlana.
Ny fomba fiasan'ny mpandraharaha manara-maso
Ny orinasam-panjakana lehibe izay manara-maso ny famonoana ny fahazoan-dàlana amin'ny tompon'ny filokana dia namaritra ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana, dia ny Tolotra Internal Revenue of Georgia, ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Zeorziana sy ny Fanaraha-maso ny Financial Monitoring of Georgia.
Ao anatin'ny fahaizany, ny rafi-pitantanan-draharaha dia manara-maso sy mampihatra ny fomba famaliana fitantanana amin'ny fanitsakitsahana ny lohahevitry ny filokana. Ny fahita dia ny fanamarinana ny Serivisy ho an'ny karama momba ny fandoavana haba ara-potoana sy ara-potoana. Ny Ministeran'ny Atitany dia mifehy ny fanatanterahana ny fepetra takian'ny lalàna momba ny fisian'ny fitaovana isaky ny andrim-panjakana hanaovana fanaraha-maso. Araha-maso ihany koa ny fanarahana ny fepetra takian'ny mpandraharaha mikasika ny sazy mandoa ara-potoana (raha napetraka izy ireo). Ny zava-dehibe dia ny hanome fitsapana ireo mpilalao kilalao casino amin'ny trosa amin'ny zanabola, izay voararan'ny lalàna tanteraka. Raha misy ny fanitsakitsahana toy izany, dia tsy maintsy mandoa onitra lehibe ny tompon'ny alàlana amin'ny fandaminana filokana. Raha misy ny fiverenan'ity fandikan-dalàna ity dia azo atao ny manafoana ny fitantanana ny trosa.
Fandaniana ny filokana
Georgia - firenena manana politika mazava sy mangarahara momba ny hetra, ambany ny vesatry ny hetra.
Ny hetsiky ny mpamaky boky any Georgia dia hetra amin'ny fomba andoavan'ny mpandraharaha tsirairay izay mahazo alalana hitarika an'ity karazana orinasa ity, 5% ny taha amin'ny VAT. Ity vesatra amin'ny hetra ity dia tsy zava-dehibe amin'ny tompon'ny fahazoan-dàlana. Na izany aza, ny solontenan'ny orinasa filokana dia mirona hieritreritra fa ny tena mahomby kokoa dia hetra 15-20% amin'ny tombony azo amin'ny filokana.
Ny mampiady hevitra dia ny toe-javatra amin'ny fandoavan-ketra hetsika hafa eo amin'ny sehatry ny filokana (casino, loteria, sns.). Ireo orinasam-pandraharahana dia mandoa hetra amin'ny taha 15% amin'ny vola miditra amin'ny asany. Noho izany, izy ireo dia ao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'ireo orinasam-pandraharahana hafa ao amin'ny faritanin'i Georgia - ireo dia hetsika izay tsy misy ifandraisany amin'ny famatsiana amin'ny serivisy indostrian'ny filokana.
Endriky ny filokana
Andininy 35 amin'ny Lalàn'i Georgia "Momba ny fandaminana loteria, filokana ary lalao ahazoana tombony" dia nametraka fetra maromaro hamela ny tompon'ny fahazoan-dàlana hanao filokana. Ohatra, tsy avela hilamina ny filokana sy ny lalao ahazoana tombony (ankoatry ny loteria fampiroboroboana), ary koa ny fivarotana / fizarana tapakila amin'ny loteria, filokana ary lalao ahazoana tombony (afa-tsy ny tapakila amin'ny loteria fampiroboroboana) any amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana sy fanabeazana ho an'ny ankizy, tranon'ireo ny fanompoana, ny toeram-pivarotan-tena ho an'ny ankizy, ny tranomboky, ny tranombakoka, ny tranon'ny birao misy ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra eo an-toerana, ary koa amin'ny toerana noraran'ny manampahefana eo an-toerana.
Voarara ny handray anjara amin'ny filokana izay tsy nahatratra ny taona 18, ary ny fandraisana anjara amin'ny casino dia ny fankalazana ny 21.
Fomba iray fanampiny ho an'ny andraikitra ara-tsosialin'ny mpandraharaha filokana ny mifehy ny habetsaky ny vola lanin'ny mpandray anjara amin'ny filokana, avy amin'ny Service Monitoring Financial any Georgia. Ny mpikarakara ny lalao ny vintana dia voatery mampahafantatra ny solontenan'ny olona ny serivisy, izay mandany amin'ny filokana mihoatra ny GEL 3 arivo. / $ 1243 isan'andro. Ny serivisy amin'ny tsy fanomezana an'ity fampahalalana ity ho an'ny mpandraharaha dia mety onitra amin'ny haben'ny GEL avy amin'ny 2-6. / $ 830-2490. Mendrika hodinihina ny famoronana ny Serivisy fanaraha-maso ara-bola ilay antsoina hoe lisitra mainty - lisitr'ireo olona voarara tsy handray anjara amin'ny filokana ao amin'ny faritanin'i Georgia. Ity lisitra ity dia ahitana indrindra ny solontenan'ny vondrona mpampihorohoro iraisam-pirenena isan-karazany sy ny andian-jiolahy.
Nandritra ny taona maro tany Georgia, misy ny fifanakalozan-kevitra momba ny filàna fandrarana ny doka filokana amin'ny fahitalavitra, radio ary media hafa. Saingy ankehitriny ny eritreritra momba ny fiatraikany ratsy amin'ny dokambarotra toy izany dia tsy mahita fanohanana ho an'ny besinimaro.
0.1 Lisitry ny Top Sites amin'ny Casino ao amin'ny 10 Georgian Online
2.1 Lalao an-tserasera any Géorgie
3 Georgia Online - Miloka any Georgia
3.0.1 Filokana an-tserasera any Georgia - tantara ara-tantara
3.0.2 Amin'ny firim-pitondrany inona moa ny orkide ara-bola an-tserasera?
3.0.3 Raha ny marina dia midika izany ho an'ny mpilalao izany lalàna izany?
3.1 Ahoana no hanombohana milalao an-tserasera ao Georgia?
3.1.1 Toerana iray any Zeorzia ary fohy ara-tantara fohy
3.1.2 Zeorzia amin'ny sarintany Azia
3.1.4 Zavatra mahaliana momba an'i Zeorzia sy Zeorziana
3.2 Casino ao Georgia: hetra
3.4 Fepetra hahazoana fahazoan-dalana
3.5 Ny saram-piterahana
3.5.1 Ny sandan'ny fanomezan-dàlana handaminana ny filokana any Géorgie
3.5.2 biraon'ny fitantanana
3.7 Ny fomba fiasan'ny mpandraharaha manara-maso
3.8 Fandaniana ny filokana
3.9 Endriky ny filokana
mandarin-dranon'i mandarin tsy misy bonus 2020